Wenger: Laga yaabee inaan Messi lasoo saxiixdo Janaayo. - Caasimada Online
Home Warar Wenger: Laga yaabee inaan Messi lasoo saxiixdo Janaayo.
Wenger: Laga yaabee inaan Messi lasoo saxiixdo Janaayo.
Tababaraha Faransiiska ah ayaa kooxdiisa Gunners ku heysta ciyaartoydii abid ugu xumaa, ka dib markii ay kooxda ka dhisan waqooyiga London ku bilaabatay Premier League xilli ciyaareedkii ugu xumaa Capital One Cup ayeyna uga soo hareen gacmaha kooxda ciyaarta Horyaalka labaad Bradford City.
62-jiraan ayaa bedelkeeda koobab badan u qaaday kooxda Emirates balse dhowaanahaan koob uma soo xareyn.
Wenger ayaa ku sheegay shirkiisii jaraa’id ee Jimcada: “Waxaan heysan jiray koox cajiib ah waxayna keenayeen natiijooyin fiican, I aamina. Waxaan koobab ku qaadnay ciyaartoy ka liita kuwaan.
“Dabcan ciyaartoydaan damiirkii aan laga miiray. Waxaad u maleysaa inaysan waxba ka quseyn kooxda guryahooda ayey aadeen ka dib guul darradii Bradford miyey ciyareen kulan cajiib ah? Iyaga ayey quseysaa.”
Wenger ayaa markaas ka dib sheegay war ay dad badani ku qosleen mar wax laga weydiiyey inuu suuqa kasoo iibsan karo ciyaartoy magac ku leh kubada cagta wuxuu ku jawaabay. “Ma waxaad ugu yeereysaa inaan saxiixyo waa weyn sameyno.
“Waxaan soo iibsan doonaa bisha Janaayo Lionel Messi waadna la fajici doontaa.”